- [[[Madaxwayne]] Sauli Niinistö
- madaxwayne kuxigeen Juha Sipilä
- Taariikhda 29 march, 1809
- Total 338,424 km²
- Biyo (%) 9.4
- 2017 qiyaas 5,509,717
Dalka Finland (Suomi, Suomen tasavalta) wuxuu ku yaalaa qaarada Yurub waxaana dhinaca dhulka daris la'ah Dawladdaha Ruushka, Iswiidhan iyo Norwey. Finland dadweynaha ku nool waa 5.1 malyan. Sanadka 1999 billowgiisii Finland waxaa si rasmi ah ugu noolaa 85 000 oo ajaanib ah. 93 % afka hooyo ee dadweynuhu waa luqadda finishka iyo 5 % oo ku hadasha afka iswiidhishka. Finland waxaa kaloo looga hadlaa luqadaha ruushka, ingiriiska, istoniyaanka, soomaaliga, jarmalka, carabiga iyo afaf kaloo badan. Finland waxaa loo qeybiyay shan gobol iyo 452 magaalo.
Qiyaastii 86 % dadka finishka ah waxay katirsan yihiin kaniisada luteriyaanka. Ortodhokiska ama dadka asal-raaca ah ee diinta sideytahay ugu dhagan waa in kabada boqilkiiba hal iyo intaan diinba aan heysan oo gaaraya 12,3 %.
Bedka Finland ey ku fadhiso 68 % waa hawd ama duur, 10 % biyo, 6 % waa dhul beereed. Qaar badan oo finishka kamid ah waxay sidii cadada ahaan jirtayba ka shaqeeyaan warshadaha farsameeya waxyaabaha laga sameeyo geedaha iyo birta. Weli qaarbadan oo kamid ah shaqooyinka cusub ee soobaxa waxaa laga helaa shirkadaha kashaqeeya cilmig farsamada iyo wax -soosaarka ama tig-nolooyida iyo xirfadaha kala duwan ee adeega.
Waddanamha degaan finlandEdit
Helsinki 1 562 570 + Espoo 232 634 + Vantaa 189 442 = "Metro-Helsinki", waa sedex magaalo oo deris ah waxaana ku nool dad dhan ilaa iyo 2 (labo) malyan.
Tampere 206 171
Turku 174 906
Oulu 130 105
Lahti 100 049
Kuopio 90 812
Jyväskylä 84 482
Rovaniemi 57 835
Bedka Finland ey ku fadhiso 68 % waa hawd ama duur 10 % biyo 6 % waa dhul labeerto (Koli national park).
Basketball field, Helsinki
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Finland&oldid=222085"
Last edited on 28 Oktoobar 2021, at 20:22
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 28 Oktoobar 2021, marka ee eheed 20:22.